အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်သို့...
ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြင်ရတဲ့ ရေတံခွန်
NAYPYIDAW WATER FOUNTAIN GARDEN (MYANMAR)
ရေတံခွန်အောက်မှာ လူတွေ ၀င်ထွက်လို့ ရတဲ့ လှိုင်ဂူလည်း ရှိပါတယ်
ရေတံခွန်သုံးဆင့် ( ဘေးနားက ကျောက်ခက်ပန်းဆွဲတွေအောက်မှာ လူဝင်ပေါက် ရှိလေသည်)
ဥယျာဉ်တွင်းမှာတော့ နေ့ခင်းအပူဒဏ်ကို မေ့သွားရလောက်အောင် သစ်ပင် ပန်းမာန်များ၊ စိမ်းစိုနေတဲ့ မြက်ခင်းများ၊ မီးအလှများနဲ့ လှလှပပ ပြင်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်.. ညမီးရောင်အောက်မှာ မထင်မရှား လက်လှမ်းမီသလောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်တွင်းအလှကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မီးရောင်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့ ရေကန်
ဖြာထွက်နေတဲ့ ရေပန်းပေါ်မှာ ပရိုဂျက်တာနဲ့ ထိုးပြတဲ့ ရေပန်းရုပ်ရှင် ဆိုတာလည်း တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပိတ်ကားအစား ရေပန်းပေါ်မှာ ပြနေတာမျိုးပါဘဲ။ လူတွေ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှု အားပေးကြပါတယ်။ ကျွန်မ ရောက်သွားချိန်မှာ ပြနေတာက ခင်မောင်တိုးရဲ့ မဟာဆန်သူ သီချင်းပါ။ စိတ်ပူတာက သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးနဲ့ ညီညီနေနိုင်တို့ ရေပန်းပေါ်မှာ ကြာနေလို့ အအေးမိမှာ စိုးတာပါ :)
ကြည်လဲ့လဲ့ဦးလည်း နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ ပျော်လို့ပေါ့။
ခပ်စွေစွေလေးကြည့်လို့... ချမ်းလို့ထင်ပါရဲ့ ...
ရေပန်းရုပ်ရှင် ပြီးသွားတော့ ဂီတသံစုံရေပန်းအက ( Musical Water Dancing) ဆိုတာ စပါတော့တယ်.. တီးလုံးသံလေးထွက်လာပြီး ကန်ထဲကနေ ရေပန်းတွေ အမျိုးမျိုး၊ အရောင်အစုံစုံနဲ့ ဖြာထွက်လာပါတော့တယ်… ပြီးတော့ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ တီးလုံသံအလိုက် လှုပ်ရှားနေတော့တာပါဘဲ။ ကိုယ်တွေက တောက ရောက်သွားသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ခမ်းနားလှတဲ့ ရေပန်းကြီးတွေ ကနေတာကို ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့။ ပါးစပ်ဟတာ ကြာသွားလို့ ပြန်ပိတ်ဖို့ မနည်းကြိုးစားလိုက်ရသေး :)
ရှေ့နားကလူတွေ တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ ဘာတွေပြော..
ရေပန်းဥယျာဉ်မှာ အခြားသော လည်စရာ၊ ကြည့်ရှုစရာများစွာ ရှိသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်.. သို့သော်လည်း နေပြည်တော်ကို တစ်ရက်ခရီးသာ သွားတဲ့တာဖြစ်ပြီး ည ၁၀နာရီမှာ ကားဆက်စီးရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အချိန် မရတော့တဲ့အတွက် ဒီလောက်နဲ့ဘဲ ဥယျာဉ်တွင်းကနေ ပြန်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်.. ကျန်ရှိသေးသော နေရာများ မရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် မဖော်ပြဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့.. မကြာခင်မှာ နေပြည်တော် မြို့တော်တစ်ခွင် မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများနဲ့အတူ ထင်ရှားတဲ့ နေရာများကို ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်…
27 Responses to “နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်သို့...”
ပျော်စရာကြီးနော်။ မြန်မာမှာလဲ အဲဒီလို ရှိနေပြီကိုး။ မြန်မာ ပြန်ရောက်ရင်တော့ သွားဖြစ်အောင် သွားလိုက်ဦးမယ်။ ရေပန်းဥယျာဉ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အဲလိုမျိုး ရုပ်ရှင် အခုထိ ကြည့်ဖူးသေးဘူး။
ဒီနေ့ ထီပေါက်မယ်နဲ့တူတယ်။ ကွန်မင့်ပေးတာ ၁ ဖြစ်နေလို့။ :D
း)).. မချောပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်သွားရတယ်...
မချောရေ ... အားရပါးရကြည့်သွားတယ်း)
နေပြည်တော်မှာ အိမ်ရှိပေမယ့် တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးသေးဘူး အဲဒီနေရာတွေကို
နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်ကို ရောက်ဖူးတယ် ညကြီးဘဲ အချိန်မရတာနဲ့ မြန်မြန်ဝင်ကြည့်ပြီး ပြန်ခဲ့တာ အခု မချော ပုံတွေကြည့်မှ ဘဲ နေရာစုံတော့တယ်
နေပြည်တော် တခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး အစ်မရေ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်လဲ ရေပန်းဥယျာဉ် ကို ဖယောင်းတိုင်မီးအလှများဖြင့် ပြသရန် စီမံဆောင်ရွက်နေပါသည်..ဟု သတင်းရရှိပါသည်..
မြင်းခြံကနေ ရန်ကုန်ကို သွားရင် နေပြည်တော်ကို ညအချိန်မတော် ဖြတ်သွားဖြတ်လာပဲ သွားဖူးတာ။ ပုံတွေကတော့ လှတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လုပ်နေပြီးကိုး။ ပြန်မှ သွားကြည့်ဦးမယ်။
Pwint Myue Zin said...
ညဘက်မှ ပိုလှတာထင်တယ်နော်.. နေ့ဘက်ဆို အဲသလောက်လှမယ်မထင်ဘူး.. ရောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်သား..း)
ညရှုခင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ချက်လေးတွေ လှတယ်။
ဘကျောက်ပြောသလို ဖယောင်းတိုင်မီးတွေနဲ့ ပြရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူးနော ... :P
နေပြည်တော်ရောက်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိသွားပြီ ချောရေ-
၁။ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော်ကို ဖူးမျှော်လိုခြင်း၊
ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကျတော့ လက်မှတ်ရဖို့ စောင့်ရတာ ပျင်းစရာကြီးနေမှာပဲ၊ အဲဒီကိုတော့ သွားချင်မှသွားတော့မှာပါ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
အစ်မချောနဲ့ အတူ နေပူတော် ရေပန်း ဥယျာဉ် လိုက်လည်တယ်။ လှသားနော်။ ငယ်ငယ်က ရောက်ဖူးတဲ့ ပြည်သူ့ရင်ပြင် တို့ ဘာတို့တောင် သတိရ သွားတယ်း)
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတာကျေးဇူးပါ၊ ဥယျာဉ်ထဲစိတ်ညစ်ရင်အော်လို့ရလား၊ နေပြည်တော်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စိတ်ညစ်တယ်ချည်းပြောနေလို့ စိတ်ရှိလက်ရှိအော်ရမဲ့နေရာရှာနေတာ။
ခမ်းနားလှပပြီး မီးထိန်ထိန်လင်းတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိသေးတာကိုးး
အစ်မသွားတာ အချိန်ကောင်းလေးပဲ သိပ်မပူလောက်တော့ဘူးထင်တယ်နော် ညဦးပိုင်းလေးဆိုတော့...
ရောက်ဖူးချင်သေးတယ်ဗျာ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မရှိတာထက်စာရင် ရှိလာတာလဲ ၀မ်းသာစရာပေါ့....
ပရိုဂျက်တာနဲ့ ပြတဲ့ဟာကြီး ရှိသေးဘူး။
ရေတံခွန်အောက်က ဖြတ်သွားရတဲ့ ဂူလေးရှိသေးဘူး..။
သေသေချာချာကို အကုန်ကျခံပြီး လုပ်ထားတာပဲနော်၊ ညဖက်ရိုက်တဲ့ ပုံတွေဆိုတော့လည်း မီးရောင်အလှတွေ မြင်ရတာပေါ့၊ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..၊
ရေတံခွန်ပုံလေး တစ်ပုံကြိုက်တယ်၊ ရေတွေခဲနေတာနဲ့ တူလို့....။
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာကို ပုံလေးတွေနဲ့ အရင်ရောက်ဖူးသွားသလိုပဲ။ ပုံတွေက ဝါးနေပေမယ့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပျော်စရာကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ သွားချင်လိုက်တာ ချောရေ.....
မီးတွေက မနာလိုစရာကောင်းလောက်အောင် ထိန်နေလိုက်တာ နယ်မြို့တွေနဲ့များကွာပါ့း)
ချော ခေါ်သွားလို့ နေပြည်တော်ကရေပန်းစီကိုရောက်သွား
ကြီးတင်ပြီးမျှဝေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချော ရေ-
ချောရေ..ကျေးဇူးပါ။ နေပြည်တော်ကို မရောက်ဖူးလို့ ပါ။ဒီရေပန်းတွေမြင်တော့Las Vegas မှာ ကုိုယ်ရုိုက်လာတဲ့ ရေပန်းက ကို ပြန်ကြည့်မိ သွားတယ်။ Las Vegas က ကုိုယ်တို့နေပြည်တော် ကို မှီရဲ့ လားလို.။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်..ဘယ်နေရာမှာဘဲ တိုးတက်တိုးတက် ၀မ်းသာရမှာပေါ့။ ဟင်းးးးးးးးးးးးးး (သက်ပြင်းရှည်ကြီးကဘာကြောင့်ချရတာပါလိမ့်?)
မန်းရွှေပြည်မှာတော့ လွမ်းစရာမီးက ခဏခဏ လာတော်မူနေတာ အခုမှ သိတော့တယ်
မီးတွေက နေပြည်တော်ကို ရောက်ကုန်တာပါလား
နောက်ဆုံးမီးရောင်တွေနဲ့ ရေပန်းပုံတွေက အရမ်းလှတာပဲ..
ညဘက်ကြီးကို လက်ငြိမ်အောင် ရိုက်နိုင်တယ်.
water of water fall is very dirty. but some people are playing there. One of my friend's son got skin allergy after playing there in water. So, it is only nice to see, becareful not to get down to water.
မီးတွေလင်းထိန်နေတာပဲနော်၊ ရေဘ၀ဲလေးကြိုက်တယ်၊ မချောပုံလေးလည်းကြည့်ချင်တာ၊ ကြိုးတံတားအောက်က တကယ်မြစ်လား၊ ဖန်တီးထားတဲ့ မြစ်လား မချော၊
တို့သွားလည်တုန်းကလဲ ပရိုဂျက်တာနဲ့ ပြတဲ့ဟာကြီး ရှိသေးဘူး။ ညနေဘက်ဆိုတော့ အေးပြီး ပျော်စရာတော့ကောင်းတယ်